Noqo dheeman qaali ah, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Weligaa ma dareentaa cadaadis? Taasi waa su’aal doqonimo ah? Waxaa la sheegay in dheemanta loo sameeyo kaliya cadaadis culus. Kama aqaano adiga, laakiin waxaan shakhsiyan mararka qaar dareemaa inaan ahay wax dhib badan sida dheeman.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo cadaadis ah, laakiin nooca aan inta badan ka fikirno waa cadaadiska nolosha maalin walba. Waxay noqon kartaa waxyeelo ama way qaabayn kartaa. Mid kale, sidoo kale waxyeello gaarsiin kara, nooca ayaa ah cadaadiska lagu waafajiyo oo u dhaqmo hab gaar ah. Shaki la'aan waxaan nafteenna ku hoos jirnay cadaadiskan. Mararka qaar waxaan isaga hoos tagnaa warbaahinta. In kasta oo aan isku dayno in aannan saameyn ku yeelan, haddana farriimaha khiyaanada leh ayaa awood u leh inay maskaxdayada galaan oo ay na saameeyaan.
Cadaadiska qaarkiis wuxuu ka yimaadaa deegaankayaga - ninka, madaxa, asxaabta iyo xitaa caruurteena. Qaarkood waxay ka yimaadeen asalkeenna. Waxaan xasuustaa inaan maqlay wax ku saabsan ifafaalaha qalin-jaalaha ah markii aan nin cusub ka ahaa Ambassador College ee Big Sandy. Dhammaanteen isku isku mid ma ahayn, laakiin filashooyinka waxay u muuqdeen inay na siin doonaan qaab. Qaarkeen baa naga gaadhay noocyo kala duwan oo huruud ah, laakiin kuwa kale waligood ma beddelin midab.
Mid ka mid ah shuruudaha sharciyeed ee inaga dambeeya wuxuu ahaa in qof walba uu raaco isla shuruucda iyo astaamaha dabeecadda, xitaa si isku mid ah ayey u socdaan. Taasi uma oggolaaneynin baaxad weyn shaqsiyeed ama xorriyatul qowlka.
Cadaadiska laqabsashada wuxuu u muuqdaa inuu si weyn u baaba'ay, laakiin mararka qaar wali waan dareemeynaa. Cadaadiskaani wuxuu abuuri karaa dareeno aan ku filneyn, laga yaabee xitaa rabitaan kacdoon. Waxaan wali dareemi karnaa inaanu xakameyno midnimadeenna. Laakiin haddaan sidaas yeelno, waxaan baabi'in doonnaa is-caayinimada Ruuxa Quduuska ah.
Eebbe ma doonayo qalinqalin huruud ah, mana doonayo in aan isbarbar dhigno. Laakiin way adag tahay in la dhiso oo la ilaaliyo aqoonsigaaga markii laguu naqshadeeyay ama lagu riixay inaad ku dadaasho heerarka kaamilnimada kuwa kale.
Ilaah wuxuu inaga doonayaa inaan dhagaysanno tilmaamaha hagida ee Ruuxa Quduuska ah iyo inaan muujino shaqsiyada uu ka dhex shaqeeyey. Si tan loo sameeyo, waxaan u baahan nahay inaan dhagaysanno Eebbe naxariistiisa, codkiisa jilicsan oo aan ka jawaabno wuxuu leeyahay. Kaliya waan dhageysan karnaa oo aan uga jawaab celin karnaa waa haddii aan raacno Ruuxa Quduuska ah oo aan u oggolaano inuu ina hanuuniyo. Miyaad xusuusataa inuu Ciise naga codsaday inaanaan ka cabsan?
Laakiin maxaa dhacaya haddii cadaadisku ka yimaado Masiixiyiin kale ama bulshadaada oo ay umuuqdaan inay kugu jiidayaan jihada aadan dooneynin inaad aado? Ma khaladbaa in aan la raacin? Maya, maxaa yeelay hadaan dhammaanteen ku soconno Ruuxa Quduuska ah, dhammaanteen waxaan ku soconnaa jihada Eebbe. Mana xukumi doono kuwa kale mana cadaadineyno kuwa kale si aan u aado halka uusan Eebbe nagu hogaaminin.
Aynu qaadanno niyadda ilaahay oo aan ogaano waxa uu inaga rajeeyo. Markii aan ka jawaab celineyno cadaadiskiisa dabacsan, waxaan noqonaa dheeman ruuxi ah oo loogu talagalay inaan noqonno.